Ndeipi iyo Yakanakisa IT Nharaunda yeBhizinesi Rangu? | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 7, 2013 Chitatu, Nyamavhuvhu 7, 2013 Jenn Lisak Golding
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvekuchengetedza bhizinesi redu muzera redhijitari kuve neyakagadziriswa, inogadziriswa IT mhinduro munzvimbo. Asi, ndeipi sarudzo yakanakira bhizinesi rako? Kutendeseka, zvinoenderana nesaizi yebhizinesi rako, kana iwe uchida kuhaya yemukati IT timu, uye kuti ingani kutonga kwaunoda pamusoro pe data rako. Kune akawanda mabhizinesi, iyi mibvunzo yakaoma kupindura.
Our Wholesale colocation mutengi, Lifeline Data Centres, yanga ichitaura nezve zvakanakira dzakasiyana mhinduro dzeIT, idzo takabatsira kuti dzive infographic. Inoongorora izvo, iko, kupi, ndiani, uye zvakadii kune akasiyana IT mhinduro, zvinosanganisira: gore komputa, mhinduro dzakatarisirwa, colocation uye mune-imba data centre.
Zvisinei nemhinduro yaunosarudza, heano mamwe makiyi ekutora ekuchengeta mundangariro:
Rega zvikumbiro zvako zvakakomba zvikutungamirire.
Yakakwira kumusoro nguva uye kuvimbika kwakaoma kuwana mukamuri yekumashure.
KUSHANDISA vashandi pamwe nekutsvagisa basa kumhanya, mari, uye mhando nyaya.
Gara uchiita math. Kurerutsa kunotora mari uye pamwedzi fizi wedzera.
Bhizinesi rako parizvino rinodzivirira sei data rako?